Timothy Samara: fitsipika 20 hamoronana endrika tsara | Famoronana an-tserasera
Tsy nifampiraharaha tamin'ny sehatry ny teôria misy ny asantsika hatry ny ela isika ary androany dia tiako ny manararaotra mahatadidy foto-kevitra tena ilaina, manararaotra ny lalàna naroson'ny Timoty samara. Amin'ity lahatsoratra voalohany ity dia hitantara ny folo amin'izy ireo aho ary avy eo ny folo ambiny satria hitanao fa faly kely amin'izy ireo aho satria ny tena izy dia mahaliana tokoa izy ireo.
Ampiharinao amin'ny asanao ve ireo torohevitra ireo? miombon-kevitra aminy ve ianao? Raha te hitantara amiko ny teknika izay ampiasainao matetika na te hizara torohevitra vitsivitsy amin'ny vondrom-piarahamoninay ianao dia fantatrao, Mamelà ahy hevitra!
1 Aza hadino ny momba ilay hevitra, ilay hafatra
2 Tokony hifampiresaka fa tsy handravaka
3 Mitenena amin'ny fiteny fahitana tokana
4 Mampiasà fianakaviana endri-tsoratra roa na telo farafaharatsiny
5 Voadona amin'ny kapoka roa: manintona ary mitazona
6 Misafidiana loko misy tanjona
7 Kely kokoa
8 Zava-dehibe ny toerana ratsy
9 Ny typography dia zava-dehibe toy ny sary
10 Ireo karazana izay tsy azo vakiana dia tsy misy fiasa
Aza hadino ny momba ilay hevitra, ilay hafatra
Toy izany koa ny fiasan'ny maritrano, ny fototra iasana sy ifotony dia zava-dehibe indrindra. Ny fiangonana dia tsy manana firafitra mitovy amin'ny hotely na valan-javaboary. Ireo lahasa izay hovolavolaina ao anatin'ny fananganana dia manan-danja tokoa amin'ny famaritana ny firafiny, ny fantson'ny atiny ary ny fahazoan'ny mpampiasa miditra. Miasa iray ihany ny kabary an-tsary, tsy maintsy omena fitaovana ampy izy io mba hahafahan'ny besinimaro mandehandeha amin'ireny miaraka amin'ny fiononana feno sy mahita ny atiny tadiavin'izy ireo. Noho io antony io dia tsy ho sasatra ny mitaona azy isika: Aza miala amin'ny dingana mialoha ny famokarana. Soraty ny tenanao, mitadiava vaovao ary atsangano tsara ilay hevitra alohan'ny hamoronana azy.
Tokony hifampiresaka fa tsy handravaka
Ny estetika tena izy dia mahazo dikany rehefa mavesatra ao an-tsaintsika izany, rehefa tonga ny teboka iray izay manolotra hevitra sasany, hevitra vitsivitsy. Ny tena tsiambaratelon'ny fifandraisana (lahatsoratra, sary, audiovisual ...) dia ny manaitra sy manome hevitra amin'ny besinimaro. Ny fampifangaroana ny hevitra dia tsy azo atao raha tsy amin'ny alàlan'ny singa tena maneho hevitra miaraka amin'ny enta-mavesatra lehibe sy lehibe. Noho izany, andramo ny tsy mampiasa singa be loatra izay tsy milaza na inona na inona.
Mitenena amin'ny fiteny fahitana tokana
Miresaka ny fomba, ny kaody momba ny fiteny sy ny kanto novolavolain'ny mpanoratra ny firafitra. Dingana iray izay mitaky fotoana, satria amin'ny farany dia ny fahitana ny tenantsika ho mpamorona. Ny fitenintsika dia hahazo traikefa amin'ny tonika mampiavaka azy, fatra amin'ny toetrantsika izay tsy isalasalana fa hitondra fiovana sy hametraka antsika ho mpanakanto. Ny fiteninao sary dia ianao. Adinoy ny fampifangaroana ny paikady sy ny feon'ny mpamorona na mpanakanto hafa, fa alaivo an-tsitrapo ilay aingam-panahy izay manaitra ny sangan'asa sasany ary ataovy ho anao izany, adikao amin'ny fiteninao sy ambanin'ny marikao manokana.
Mampiasà fianakaviana endri-tsoratra roa na telo farafaharatsiny
Resaka firindrana sy filaminana izany. Ny fampiasana fianakaviana mihoatra ny telo dia hitarika amin'ny fanelingelenana fifandraisana sasany izay hampihena ny fahaizan'ny fifampiresahana. Ny fianakaviana miasa tsirairay dia tsy maintsy manana toerana, toerana, hafatra ary asa iray. Raha manararaotra ny habetsany isika dia hanodikodina ny taolana ary hamitaka ny mpamaky amin'ny farany.
Voadona amin'ny kapoka roa: manintona ary mitazona
Ny paikady mandresy lahatra dia mety ho tsotra na sarotra araky ny fanapahan-kevitsika, fa na inona na inona tetikadintsika dia misy dingana roa na andry roa hamaritana ny fahombiazany: Mila manintona, manaitra, mila amin'ny fomba voalohany jerena tokana ny asantsika ary manomboka Avy eo dia miditra amin'ny dingana manaraka isika: ankehitriny dia mila mirakitra an'io fizarana fandinihana io isika. Ny fihazonana izany fiheverana izany dia miankina mivantana ny kalitaon'ny atiny atolotray anay sy ny fahombiazan'ny fiteninay manokana.
Misafidiana loko misy tanjona
Ho fantatrao tahaka ny ataoko fa miteny ho azy ireo loko. Ny tsirairay amin'izy ireo dia misy hovitrovitra sy vokany manokana. Raha fintinina, hafatra mifameno izay manaraka ny fananganana sary izy ireo. Tokony ho fantatrao ny paleta, araho ny hafatra tolo-kevitr'izy ireo amintsika mifanaraka amin'ny hafatra ankapobeny momba ny forongonao. Ny nuansa izay manohana ny foto-kevitra arahinay ary koa ny loko manazava na mampangina azy.
Angamba ity dia iray amin'ireo resabe miteraka fahasamihafana lehibe amin'ny hevitra eto amintsika. Ny fahatsorana foana ve no valiny? Izaho manokana dia tsy mieritreritra fa ady eo amin'ny onja artista io. Heveriko fa ny adihevitra dia ny hoe minimalism ve no vahaolana sa tsia, ary raha nisy izany dia tena hotoheriko tanteraka io fanambarana io. Ny sanganasa tsirairay sy ny hafatra tsirairay dia misy filàna filàna tsy maintsy fantatry ny mpanoratra sary amin'ny fomba famahana. Heveriko fa ny zavatra resahintsika dia ny fampivelarana ny fahaizantsika sentetika, mianatra manavaka izay tena zava-dehibe amin'ny famoronana antsika. Farito izay singa tena manana zavatra holazaina ary iza amin'izy ireo no fisaka amin'ny haavon'ny fifandraisana. Mba hampivelarana an'io fahaiza-manao io dia makà fitsapana: esory tsirairay ny singa rehetra amin'ny famolavolana anao. Amin'ireo tsy fisiana rehetra Iza amin'ireo no mamela foana ny atiny ary iza amin'ireo no tsy adinoo rehefa mamafa azy ireo ianao?
Zava-dehibe ny toerana ratsy
Indrindra amin'ny logo, ny habaka ratsy dia mazàna manome fanampiny izay mamaritra ny kabary ary farany manome fahefana azy. Asa amin'ny ambaratonga roa izy io ary noho izany misy ny fahafaha-manao betsaka kokoa. Aza hadino izany refy ratsy izany satria matetika izy io dia afaka manome ny spark izay tsy hita amin'ilay sary tsy maharesy lahatra anao.
Ny typography dia zava-dehibe toy ny sary
Na ny typographique na ny sary na ny sary aza dia samy manana ny asany sy ny tanjony: mba ho fiasan'ny zava-misy mampiasa kaody na fitsipika samihafa. Miverina amin'ny fahatsapana ho teboka iray ilaina isika. Tsy maintsy mianatra manintona isika inona ny typeface izay mifanaraka amin'ny tsipelinaantsika na amin'ny paleta miloko aza.
Ireo karazana izay tsy azo vakiana dia tsy misy fiasa
Indraindray isika dia misafidy làlana haingam-pandeha hahazoana ny fanavahana ny marika iray toy ny fampiasana marika hafahafa sy tsy azo atao amin'ny famoahana marika izay raha ny tena izy dia mavesatra fa tsy fanamafisana. Mila manisy lavaka ao amin'ny fitadidian'ny mpihaino antsika isika, na izany aza, raha mampiasa marika na karazana tsy azo faritana isika dia handefa sary tsy misy atiny. Izay tsy takatra dia tsy azo atao tsianjery ary tsy mahatadidy. Miezaha mitady fahasamihafana amin'ny fomba hafa, feno pitsopitsony sy feno kokoa, raha tsy izany ianao dia latsaka ao anaty fandrika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Timothy Samara: Fitsipika 20 momba ny famoronana endrika tsara